CUTUBKA 1AAD - (BAAQA JAMHUURIYADDA)
Qodobka 1aad - Mabaadi'da Asaasiga
1. Dastuurka Soomaaliya waxaa saldhig u ah Quraanka kariimka ah iyo Sunnada Nabi Muxammed (scw), wuxuuna hormarinayaa maqaasidda shareecada iyo cadaaladda bulshada.
2. Soomaaliya waa dal Islaam ah, dadkiisuna ku abtirsadaan dunida Carabta iyo Afrikaanka.
3. Dastuurka Soomaaliya wuxuu dhiirrigelinayaa xuquuqda aadanaha, talinta sharciga, shuruudaha guud ee xeerka caalamiga ah, cadaaladda, xukuumad loo dhan yahah oo ku dhisan wadatashi, kal-soocidda awoodaha sharcidejinta, fulinta iyo garsoor madaxbanaan oo leh hannaan ku dhisan la-xisaabtan iyo hufnaan oo ka jawaabaya danaha dadweynaha.
4. Haweenku waa in ay ka mid noqdaan dhammaan hay’adaha guud ee qaranka, gaar ahaan jagooyinka laysu doorto iyo kuwa laysu magacaabo ee saddexda laamood ee dowladda iyo Guddiyada madaxabannaan ee Qaranka.
Qodobka 2aad – Dowladda iyo Diinta
1. Islaamku waa Diinta Dowladda.
2. Diin aan ahayn Islaamka laguma faafin karo dalka.
3. Lama soo saari karo sharci aan waafaqsanayn Mabaadi’da Guud ee Shareecada Islaamka iyo Maqaasiddeeda (Ujeeddooyinkeeda).
Qodobka 3aad – Sarraynta Dastuurka
1. Dastuurka Soomaaliya oo ku salaysan mabaadii’da shareecada Islaamku waa sharciga dalka ugu sarreeya, isaga ayay xukuumaddu u hoggaansamaysaa, wuxuuna hagayaa siyaasaddaha iyo go’aannada qaybaha xukuumadda oo dhan.
2. Sida ku xusan Cutubka tobnaad ee Dastuurka, maxkamad ayaa burin karta sharci kasta ama tallaabo maamul oo ka soo horjeedda Dastuurka.
Qodobka 5aad – Afka Rasmiga ah
1. Afka rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliya waa Af-soomaaliga oo ka kooban: Maxaa tiri, Maay tiri iyo Carabi sida ku cad jadwalka.
3. Guddoon afri Qarameed oo keliya ayaa lagu oggolaan karaa waxkabeddelidda dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya.